टीकटकले ल्यायो स्मार्ट फोन
२o७६ कार्तिक १७ आइतबार
काठमाडौँ । पछिल्लो समयको चर्चित सोसल मिडिया प्लाटर्फम टिकटकको मातृ कम्पनी बाइट डान्सले आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ ।
बाइट डान्स नाम गरेको कम्पनीले स्मार्टिसन जिआनगुओ प्रो थ्री नामक स्मार्टफोन लञ्च गरेको हो ।
कम्पनीले स्मार्टफोन बजारमा ल्याउने समाचार वर्षको सुरुमै सार्वजनिक भएको थियो । अन्ततः आफ्नो फ्लागसीप डिभाइसको रुपमा बाइट डान्सले स्मार्टिसान जियांगुओ प्रो ३ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो ।
यो स्मार्टफोनमा धेरै उत्कृष्ट फिचरहरु रहेको बताइएको छ । जसमा शक्तिशाली प्रोसेसरका साथै पछाडिको भागमा ४ वटा मुख्य क्यामरा रहेका छन् ।
चीनमा लञ्च गरिएको यो फोनको सुरुवाती मूल्य २८ सय ९९ युआन तोकिएको छ । जुन करीब ४५ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
यो स्मार्ट फोनमा १ हजार ८० गुणा २३ हजार ४० पिक्सेल रिजोलुसन युक्त ६.३९ इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ ।
यसमा १२ जिबीसम्मको र्याम छ भने २ सय ५६ जिबीको स्टोरेज रहेको छ । साथै फोनमा स्नापड्रागन ८५५ प्लस प्रोसेसर रहेको छ ।
यो फोनले स्मार्टिसन अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्दछ । तर यो एन्ड्रोइडको कुन संस्करणमा आधारित छ भन्ने बारेमा खुलाइएको छैन । २ सय ५६ जिबी इन्टर्नल स्टोरेजयुक्त फोनमा फास्ट डाटा ट्रान्सफरका लागि युएफएस थ्री इक्वेलटु जिरा सपोर्ट उपलब्ध छ ।
फोटोग्राफीका लागि टिकटकको यो फोन उत्कृष्ट रहेको छ । यसमा क्वाड रियर क्यामरा सेटअप रहेको छ । अर्थात् पछाडिको भागमा रहने क्यामराहरु चारवटा रहेका छन् । जसमध्ये ४८ मेगापिक्सेलको प्राइमरी सेन्सरसँगै १३ मेगापिक्सेलको वाइड एंगल क्यामरा, ८ मेगापिक्सेलको टेलिफोटो लेन्स र ५ मेगापिक्सेलको म्याक्रो क्यामरा पनि रहेको छ ।
यो फोनको प्राइमरी क्यामरामा सोनी क्ष्ःह् ५८६ सेन्सर रहेको छ । त्यस्तै यो स्मार्टफोनमा २० मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा रहेको छ ।
४ हजार मिलिएम्पियर आवर क्षेमताको ब्याट्री रहेको यो फोनको ब्याट्रीले क्विक चार्ज फोर प्लस चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ ।
कम्पनीले यो फोनका विभिन्न तीन प्रकार लञ्च गरेको छ । जसमा पहिलो ८ जिबी र्याम र १ सय २८ जिबी स्टोरेजवाला रहेको छ, जसको मूल्य २८ हजार ९९ युआन रहेको छ । त्यस्तै ८ जिबी र्याम र २ सय ५६ जिबी स्टोरेजवाला फोनको मूल्य ३१ हजार सय ९९ युआन रहेको छ भने १२ जिबी र्याम र २ सय ५६ जिबी स्टोरेजवाला
फोनको मूल्य ३५ हजार ९९ युआन रहेको छ । सेतो र कालो रङमा उपलब्ध यो फोन हाल चिनिया बजारका लागि मात्र लञ्च गरिएको हो ।
काठमाडौँ । पछिल्लो समयको चर्चित सोसल मिडिया प्लाटर्फम टिकटकको मातृ कम्पनी बाइट डान्सले आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । बाइट डान्स नाम गरेको कम्पनीले स्मार्टिसन जिआनगुओ प्रो थ्री नामक स्मार्टफोन
स्मार्ट फोनको प्रतिस्पर्धा, मेगा पिक्सेलको वार
काठमाडौँ । सन् २०१२ मा नोकिया, मोबाइल इन्डस्ट्रीको टप कम्पनीमा गनिन्थ्यो । सिम्बियन अप्रेटिङ् सिस्टम-ओएसमा आधारित नोकिया स्मार्ट फोनमा ८०८ पूर्ण भ्युसहितको ४१ मेगा पिक्सेल को क्यामेराले बजारमा राम्रै चर्चा
पाँच क्यामरा भएको ह्वावे नोभा फाइभ टी सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौँ । ह्वावे कन्ज्युमर बिजनेस ग्रुप (सीबीजी) ले नयाँ स्मार्टफोन ह्वावे नोभा फाइभ टी आज नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालभर उपलब्ध रहेको नोभा फाइभ टीले ग्राहकहरूलाई सहज रूपमा
बालबालिकालाई स्मार्ट फोन चलाउन किन दिने ? किन नदिने ?
काठमाडौँ । बालबालिका भनेका गीलो माटो हुन् जस्तो आकार दिइयो त्यस्तै बन्छन् । बालकको प्रारम्भिक सिकाई गरेर र देखेर हुन्छ।अनि सुनेर, बोलेर र पढेर सिक्छ। शुरुका बर्षमा जे देख्यो त्यही